लकडाउलमा अत्याधिक मासुको सेवन – Dudhauli News
लकडाउलमा अत्याधिक मासुको सेवन
दुधाैली न्यूज — १२ श्रावण २०७७, सोमबार ०८:१० add comment
रोहित गुरुङ –
दुधौली / कोभिड १९ कोरोना भाइरसको कारण भएको बन्दाबन्दीको समय अबधीमा सिनधुलीको दुधौलीमा अत्याधिक पशुबध अर्थात मासुको प्रयोग भएको पाईएको छ । पहिलेको सामान्य समयमा भन्दा यो बन्दान्दीको समयमा धेरै नै मासुजन्य पशुबध भएको स्थानियहरुको भनाई रहेको छ ।
दुधौली न्युजले स्थानीय संग गरेको कुराकानिको आधारमा दुधौली नगरपालिकाको वडा नम्बर ९ मा मात्रै दुईसय भन्दा बढी रागा, सय भन्दा बडी सुगुर खसिबोका र हजारौको संख्यामा लोकल तथा ब्वाइलर कुखुराको मासु र हाँस खपत भएको पाईएको छ । त्यसै गरी वडा नम्बर १० र ११ मा पनि एक सय भन्दा बढीको नै रागाको मासु खपत भएको पाईएको छ । दुधौली नगरपालिकामा रागाको मासुको ब्यावसायिक रुपमा गर्दै आएको मोहान श्रेष्ठले चैत्र ११ यता ७५ वटा भन्दा बढी रागाको बध गरी मासुको बेचबिखन गरेको छ । भने यता दुधौली ९ खाडीपारी प्रकास बिक मान बहादुर र राम बहादुरले मात्रै लकडाउन एता ५० वटा रागाको मासु बिक्री गरेको छ ।
कुखुराको मासु बिक्री गर्नेहरुले यो लकडाउनमा मासुको माग पुरा गर्न नसकेको बताएका छन् । सामान्य रुपमा नै बिक्रि बितरण भईरहेको मासुको मुल्य लाकडाउन यता आकासिएको छ । प्रति केजि रु २ सयमा किनबेच हुने रागाको मासु हिजो आज ३ सय पुगेको छ । ६ सय देखि ६ सय ५० प्रति केजिको खसिको मासु ८ सय पुगेको छ । यस्तै ब्वाईलरको मासु प्रति केजि रु ४ सय ५० सम्म पुगेको छ । बिश्व स्वास्थ्य संगठनले माहामारीको रुपमा फैलिएको यो कोरोना भाईरसको जोखिमको अवस्थामा पशुजन्य मासुमा त्यति जोड नदिनु भनेका छन् । तर संगठनको अनुरोधलाई नै इन्कार गर्दै दुधौलीको स्थानियहरुले बिगतमा भन्दा ज्यादै मासुको प्रयोग गरेको पाईएको छ । मासुको भाउ जति नै बढे पनि सर्बसाधरणले उपभोग गर्न छाड्नुको सट्टा अझ प्रयोगमा ल्याएको छ । लकडाउनको समयमा घर बाहिर भएको आफ्ना आफन्तहरु सबै भेला भएको समयकमा रमाईलो गरेर मिठो मिठो परिकार बनाएर खाने रमाइलो गर्ने गर्ने हुनाले पनि योे समयामा मासुको अत्यधिक प्रयोग भएकोे स्थानियहरुको भनाई रहेको छ ।
यसरी पशुजन्य मासुको अत्याधिक खपत भएपछि सामान्य किसानहरुलाई प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ भई सहयोग मिल्दछ । किसानहरुले पलेको रागा, खसि, कुखुरा समय मै बिक्रि भईदिदा किसानहरु आर्थीक उन्नती हुने हुनाले किसानहरु ब्यवसायिक कृषि तर्फ उन्मुख हने हँुदा यसको प्रत्यक्ष लाभ किसानहरुलाई हुन्छ । यता मासुको ब्यवसायिक बेच्ने पसले होटल आदिमा समेत यसले फाइदा पुग्दछ । मासुलाई राम्रो संग पाक्ने गरी पकाएर प्रयोग गर्नाले राम्रो हुने चिकित्सकहरुको भनाई रहेको । दुधौली नगरपपालिका स्वास्थ्या साखा प्रमुख जगदिश मण्डालका अनुसार मासु एक प्रोटिनले भरिपूर्ण पौष्टिक आहार हो । मासुमा १४ देखि २१ प्रतिशत सम्म प्रोटिन पाइन्छ । त्यस्तै मासुमा जिङ्क, भिटामिन बि र पोटासियम जस्ता शरीरलाई आवश्यक तत्व पनि पाइन्छ । सन्तुलित भोजनमा मासुको प्रयोग अनिवार्य नै मानिन्छ । स्वस्थ व्यक्तिले हप्ताको एक देखि दुई छाक भोजनमा मासु समावेस गर्नु उपयुक्त हुन्छ । स्वस्थ व्यक्तिले दिनभरमा १०० देखि १५० ग्राम सम्म मासु खान उपयुक्त हुन्छ । मोटोपना भएको मानिसले एकपटकमा तीन देखि चार पिस भन्दा बढी मासु खान उप।युक्त नहुँने चिकित्सकहरुको भनाइ रहेको छ ।
बेफाईदा तथा असर
अत्यधि मासु सेवनले मानिसमा फाइदा भन्दा पनि बढि बेफाईदा हुने चिकित्सकहरुको भनाई रहेको छ । नेपाली मासुका भिन्न परिकार बनाएर खाने चलन छ । तर मासु कति खाने ? कस्तो मासु खाने ? मासु खाँदा के–कस्ता कुरामा सावधानी अपनाउने ? भन्ने चेतना निकै कम भएको पाईन्छ । चाडवाड लगत्तै मासुजन्य रोग लाग्नेहरुको संख्या पनि अधिक हुने बिगतको तथ्याङ्कले बताएको छ । झनै यस्तो माहामारीको समयमा भएको अत्याधिक मासु सेवनले कतै अर्कौ आपत्ति त आउदैन भन्ने चिकित्सकहरुलाई चिन्ता हुन थालेको छ । झन दीर्घ रोग लागेकाले खानपिनमा ध्यान नदिँदा बिरामीलाई गम्भिर अवस्थामा अस्पतालमा पु¥याउनु परेका बिगतका थुप्रै उदाहरणहरु छन् ।
चिकित्सकहरुका अनुसार लकडाउनको समयमा मानिसहरुको खासै भारी काम नहुने खानपिनमा बिशेष ध्यान पु¥याउनु पर्ने हुन्छ । अन्यथा यो समयमा उच्च रक्तचाप, मुटरोग, मधुमेह र पेटजन्य समस्याका विरामीको संख्या हृवात्तै बढ्न सक्ने चिन्ता ब्यक्त गरेका छन् ।
त्यस्तै दुधौली नगरपालिकाको बजारमा पशुबधसाला नहुँदा गाउँघर तथा बजारमा पाइने अस्वस्थकर मासुका कारण मानिसहरुमा तत्कालै टाइफाइड, झाडापखला, क्षयरोग, आउँ, पेट फुल्ने, मृगौलाको रोग, कोस्टल इन्फेक्सन, फुड पोइजनिङ आदि समस्या समेत देखिने गरेको चिकित्सकहरुको भनाइ रहेको छ ।
जिल्ला जनस्वाथ्य साखा सिन्धुलीका डाक्टर जितेन्द्र शाहका अनुसार मासुको सेवनमा होसियारी नअपनाउने हो भने अस्वस्थ मासुकै कारण डेढ सय भन्दा बढि प्रकारका रोगको संक्रमणको खतरा रहन्छ । राम्रोसँग नपकाएको खण्डमा वा रोगी पशुपन्क्षीको बध गरेमा मासुको माध्यमबाट पशुपन्क्षीका रोगहरु पनि मानिसमा लाग्ने डाक्टर शाहको भनाई रहेको छ । डा शाह भन्नुहुन्छ “मानिसमा लाग्ने पशुरोगहरुलाई जुनोटिक डिजिज भनिन्छ । मासुबाट लाग्ने परजीवी रोगहरुमा टेनियासिस, हाइडाटिडोसिस, सिस्टिसर्कोसिस, ट्राइचुनेलोसिस, इकानोकोकोसिस र नाम्ले जुका मुख्य हुन । यी सबै संक्रमण पशुको संक्रमित काँचो मासुका परिकारबाट मानिसमा सर्छन् ।” त्यस्तै उहाँ भन्नु हुन्छ “बिषाणुजन्य रोगहरुमा बर्डफ्लु, खोरेत र रानिखेत पर्छन भने जीवाणुजन्य रोगहरुमा एन्थ्राक्स, बुर्सेलोसिस, बोभाइन एण्ड एभिएन ट्यूवरकुलोसिस, टाइफाइड फिवर, लेप्टोस्सपाइरोसिस, स्ट्रेप्टोकोकोसिस, स्टेफाइलोकोकोसिस पनि सर्न सक्छन् ।
प्रोटोजोवाजन्य रोगहरुमा भने टोकोसोप्लाज्मासिस, जियार्डीयोसिस, अमिबियोसिस, व्यालान्टिडियोसिस आदि रोग सर्ने सम्भावना अत्याधिक हुन्छ । यी बाहेक मासुजन्य पदार्थकै कारण दाद र लुतो पनि हुने संभावना हुन्छ । ” यस्तो समयमा मानिसहरुले सकभर हरियो सागपात, फलफुल र हल्का खानाको सेवन गर्नु उपयूक्त हुने बताएका छन् ।